Akinshin ओक्साना: Filmography रूसी तारा
अभिनेत्री ओक्साना Akinshin - एक odious व्यक्तित्व। पक्कै, प्रतिभाशाली बौद्धिक, असहिष्णु र अशुद्ध pas गर्न तुरुन्तै पूर्व। फिल्म Akinshin संलग्न भने तपाईं एक मिश्रित चाखलाग्दा अमरीकी पाउनुहुनेछ। यो कलाकार कुनै अन्य जस्तै, अन-स्क्रिन यथासक्य निष्कपटता र मनोवैज्ञानिक तीव्रता को वातावरण सिर्जना गर्न, सक्षम छ।
ओक्साना Akinshina संग सिनेमा - फिल्म को सांगीतिक "दोस्तों" मा स्त्री र सेक्सी प्रयोगहरू गर्न "बहिनीहरु" मा कोणीय uncompromising किशोरी देखि उनको heroines द्वारा सिर्जना रूपान्तरणहरू एक ज्वलन्त दायरा। स्क्रिनमा अभिनेत्री, केही पागल कार्य को लागि सधैं काल पर्खने embodies जो प्रत्येक छवि, देखि। त्यो वास्तविक जीवनमा यो छ - extravagant र आकर्षक, समझदार र साहसी।
Akinshin ओक्साना: Filmography को 2000s को शुरुवात
उनको debut को Arthouse गर्न gravitating, कला लागि आवेग भएका सबै सम्झना। फिल्म Bodrov जूनियर "बहिनीहरु" (2001) र यस श्रेणी को एक मोडेल को पूर्ण अर्थमा छैन हुनत, शैली, कलात्मक डिजाइन, कास्टिंग र साउन्ड मामलामा उहाँले यो एकदम नजिक छ। तेह्र वर्ष पुरानो ओक्साना, जाहिर छ, फिल्म नै, कहिल्यै stepdaughter थियो gangster र chases र बन्दुक यस्तो साहसिक अनुभव थिएन मात्र अपवाद संग प्ले। त्यो सम्म सिनेमा (- मुन, पिताजी - मिस्त्री आमा) बाट, सेन्ट पीटर्सबर्ग एक समृद्ध परिवार मा भयो। उनको साथीहरूको थुप्रै जस्तै, त्यो बच्चाको रचनात्मक सर्कलमा नृत्य अध्ययन। सर्गेई Bodrov दावेदार देखि मुख्य भूमिका लागि फिर्ता गर्न उत्सुक लामो लाइनहरू आकर्षित जो फिलिम "बहिनीहरु" को कास्टिंग, Akinshin, सामान्य रूपमा, दुर्घटना द्वारा आए। Bodrov एक जवान स्वतन्त्र र बलियो झुकाव, conformist छैन र एक राम्रो केटी को पहिचान खोज्दै थियो। आठ-डीन बिना कुनै हिचकिचाहट बहिनी आमा को भूमिका को लागि, Katya Gorev प्ले छनौट Bodrov ओक्साना Akinshin। व्याकुल र उत्तरदायी रूपमा उनको चरित्र, "बहिनीहरु" को रिलीज पछि थाले जसमा चलचित्रहरू अन्य पछि एक देखिन्छन्। र यो कामको लागि "बहिनीहरु" पुरस्कार जित्यो "सबै भन्दा राम्रो अभिनय जोडी लागि।"
लिली - छैन सधैंभरि
2002 मा, वहाँ एक poignant नाटक स्वीडिश निर्देशक Lukas Moodysson गरेको "Lilya सधैंभरि" बक्समा कार्यालय थियो। मुख्य भूमिका ओक्साना Akinshin "बहिनी" मा Moodysson मनपराएका गर्ने निमन्त्रणा गरिएको थियो। यहाँ, अभिनेत्री सोह्र बालिका लिली को रूप मा देखा, उनको आमा आफु को लागि रोक्नु गर्न छोडेर। को हेरोइन र यति गाह्रो, हठी वर्ण मा, यो organically छ कपट र falseness सहनुहुन्न, उनको परिवार र स्कूलका साथीहरू संग उनको सम्बन्ध धेरै जटिल छन्, र यो कतै छ समर्थन पाउन गर्दैन। मात्र अन्य र हृदयस्पर्शी प्रेम लिली एक Sirota Volodya भयो, तर उहाँले लिली राम्रो जीवनको भूत लागि स्वीडेन गए धोका भएपछि आत्महत्या प्रतिबद्ध जान्छ। भूमिका, को पाठ्यक्रम, अभिनेत्री असफल भयो। पर्वहरुलाई मा तस्विर द्वारा प्राप्त पुरस्कार बीच, त्यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को लागि दुई पुरस्कार हो, आफ्नो Akinshin ओक्साना जित्यो। Filmography जवान कलाकार तथापि, सम्पूर्ण वर्ण कठिन परिस्थितिमा एक कठिन जीवन निहित छ। फिल्म Andreya Proshkina द्वारा व्लादिमीर Zheleznikova "Moths खेल" उपन्यास मा अभिनेत्री यस्तै टोन को भूमिका पायो - त्यो प्रेमिका, मायालु protagonist संगीतकार हड्डी उनको लिनु दिनु छैन भनेर प्ले विश्वासीपूर्वक र selflessly। Akinshin नै भूमिका pursues 2003 मा डच फिलिम "दक्षिण" - को दुर्भाग्यपूर्ण आप्रवाशी, एकल आमा, नेदरल्यान्ड बस्ने अवैध Zoe। अभिनेत्री सजग र समान भूमिकाको खेल्नको लागि एउटा प्रस्ताव स्वीकार भएनन्।
2004 मा, ओक्साना तिनीहरूले शूटिंग को पहिलो दिन काम गर्न आउन छैन किनभने, फिल्म मिलाइएको Romana Akunina "राज्य परामर्शदाता" मा साहस कर्म गर्ने व्यक्ति extravagant एस्तर को भूमिका मा चमक मौका छुटेका थिए। त्यसै वर्ष मा Akinshin uncompensated गुप्तचर साहसिक मा Irina रूपमा उज्ज्वल निस्क्यो "बर्न सर्वोच्चता।" एक कल्पना Nikolaya Lebedeva (2006) "खरानी कुकुर को Wolfhound", त्यो फारम knesinki मा देखा (केहि एक राजकुमारी जस्तै) Eleni, र यो एकदम फरक भूमिका थियो। बलियो-इरादों, नाजुक, साहसी र सिपालु केटी योद्धा सार्वजनिक आदर र प्रशंसा चासो जगायो। फिल्म, को आलोचकहरु मन यद्यपि, सफलतापूर्वक देश को स्क्रीन मार्फत छैन यो भाग कि Akinshin ओक्साना तथ्यलाई द्वारा प्ले अन्तिम भूमिका पारित, र निश्चित। Filmography अभिनेत्री कि स्क्रिन चमकता सांगीतिक Valeri Todorovski "दोस्तों" मा देखा रमणीय वर्ण replenished। यहाँ परिपक्व र आकर्षक केटी प्रतिनिधि nonconformist युवा पछिल्लो शताब्दीको 50-एँ प्ले। "Redneck", जीवन शैली र मा अर्थोडक्स ideological पार्टी एकाइहरु गर्न टाँसिएको वस्त्र, दोस्तों विरोध मुक्त विचार र ठूलो स्वरमा रंगीन पोशाकहरू।
चलचित्रहरू मा हाल काम
पत्रुस Buslova फिलिम "Vysotsky। एक पटकथा देखि "(2011) जीवित लागि धन्यवाद Nikity Vysotskogo मिश्रित प्रतिक्रिया कारण छ। तस्विर दर्शक को एक विशाल संख्या संकलित भएको छ, र त्यही समयमा कला धेरै प्रसिद्ध मानिसहरूले नकारात्मक मूल्यांकन भएको थियो। फिलिमहरु को भाग रूपमा अभिनय भव्य गरिएका: Panin Andrey, Leonidov मैक्सिम, Urgant इवान, Smolyakov Andrey Bezrukov Sergey Akinshin ओक्साना। Filmography अन्तिम एक वास्तविक व्यक्ति (ओक्साना Afanasyeva) को प्रोटोटाइप थियो जो ठूलो कवि Tatyana Ivleva प्रेमिका, को भयातुर र हृदयस्पर्शी भूमिका shone र एकै समयमा Vysotsky सबै प्रेमीहरूको को सामान्यिकृत छवि प्रतिनिधित्व। एक वर्ष पछि, त्यो कमेडी "8 पहिलो तिथिहरु मा तारा अङ्कित। उनको हेरोइन को कहानी मा - अग्रणी कुरा देखाउँछ विश्वास - निरन्तर जिद्दी भाग्य पशुचिकित्सा Nikita ल्याउँछ। फिल्म गर्न sequel मा "8 पहिलो छोडपत्र" नायक unsuccessfully छोड्न प्रयास। को फिलिमहरु - अंश मात्र kinobiografii ओक्साना Akinshina, पहिले नै 20 भन्दा बढी टेप अभिनय गर्ने कलाकार। अभिनेत्री को तीव्र विशिष्ट र सूक्ष्म मनोविज्ञान - एक ग्यारेन्टी त्यो साँच्चै Starry भविष्य भनेर।
यसलाई व्यक्तिगत अगाडि उज्ज्वल उपन्यास मा प्रसिद्ध भइन् ओक्साना, दुई सुन्दर synishek हुर्काउन कि थप्न रहन्छ - फिलिप र हड्डी।
रूसी melodrama 2014-2015, उत्कृष्ट फिल्म एउटा सूची। निर्देशक, अभिनेता र भूमिकाको
दिमित्री Isaev, अभिनेता। रूसी फिलिम र थिएटर अभिनेता। जीवनी, व्यक्तिगत जीवन
नाटक गीतिनाटकहरू फरक के छ, र तिनीहरूले के सदृश गर्छन्?
जीवनी men'shovoy जूलिया उतराधिकारीनी तारा आमाबाबुले
लाश बारेमा कमेडी: हास्यास्पद subgenre
Baturin Yury (अभिनेता): जीवनी, क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
सङ्ग्रह एक अपरेसन हो प्राय: अन्तर्राष्ट्रिय बस्तियोंमा प्रयोग गरिन्छ
योजना ट्यूब प्रवर्धक। को एम्पलीफायर को ताराहरु रेखाचित्र
कस्ता रूखहरू पतनमा लगाएका छन्? शरद ऋतुमा कुन फलहरु रोपिएको छ?
को संविधान कागजातहरू मा परिवर्तन कसरी?
Prostatitis एन्टिबायोटिक र अन्य विधिहरू को उपचार
एलसीडी "बर्च Grove", Kudrovo: परिसर को वर्णन, निर्माण प्रगति र समीक्षा
किन एन्ड्रोइड स्क्रिन जाँच्नका
अनिवार्य सामाजिक बीमा जनसंख्या को राज्य समर्थन को एक तत्व को रूप मा
Evgeni Aldonin: क्यारियर मिडफिल्डर, ठूलो फुटबल गर्न क्रिमीआ देखि चयन
धनु महिला मा चन्द्र: विशेषताहरू, निर्दिष्टीकरण